Nagarik Bazaar - माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत खातामा थप बीमा सुबिधा
काठमाडौँ- आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सुरुवातसंगै माछापुच्छ्र्रे बैंक लि. ले आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै माछापुच्छ्रे स्मार्ट बचत खातामा रु.१४ लाख १० हजार बराबरको बीमा सुविधा थप गरेको छ । बैंकले स्मार्ट बचत खाता खोल्ने ग्राहकहरुलाई १० लाख सम्मको दुर्घटना बीमाको साथमा १८ जटिल प्रकृतिका रोगहरुको उपचारमा ३ लाख तथा अस्पताल भर्नामा रु. १ लाख सम्मको उपचार खर्च प्रदान गर्नेछ भने वार्षिक रुपमा १० हजार सम्मको औषधी खर्च समेत उपलब्ध गराउनेछ ।
माछापुच्छ्रे बैंक लि.ले १ बर्ष अगाडी बिमा सुविधा, औषधि उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना लगायतका बिभिन्न विशेषताहरुको साथमा सुरु गरेको स्मार्ट बचत खाताप्रति ग्राहकहरुमा बढ्दै गएको आकर्षणलाई लक्षित गरि उक्त बचत खातामा विषेशताहरु थप गरेको हो । रु.५ हजार न्यूनतम मौजदातमै खोल्न मिल्ने माछापुच्छ्रे बैंकको स्मार्ट बचत स्मार्ट बचत खाताको बीमा सुविधाअन्तर्गत विभिन्न समयमा ग्राहकहरुले बीमा रकम प्राप्त गरिसकेका छ्न । जस अन्तर्गत बैंकले हालसम्म ११५ जना भन्दा बढि ग्राहकलाई बीमा रकम प्रदान गरिसकेको छ ।